Ukuguqula iiSlugs zePosi kwiWordPress yeSEO | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 2, 2009 NgoLwesithathu, Julayi 9, 2014 Douglas Karr
Ngamaxesha xa usenza uphando lwamagama aphambili xa bhloga ukusebenziseka kweinjini yokukhangela, Ungafumanisa ukuba inani eliphezulu labaphandi bapela gwenxa okanye amagama afanayo. Umzekelo unokuba yi-USS Forrestal ngokuchaseneyo I-USS Forestal.
Ukubonisa kwiziphumo zokukhangela amagama apelwe gwenxa licebo elisebenza kakuhle… kodwa usenokungafuni kupela igama elingalunganga kwisihloko sakho seposi okanye kumxholo wakho. Ngamaxesha onke, umntu uza kwalatha mpazamo phuma kuwe!
Endaweni yokujongeka uneentloni, thatha ithuba kwezinye iindawo kumxholo wakho ukupela igama ngokungalunganga:
akho Thumela i-Slug (ividiyo engezantsi)
Ngaphakathi kwethegi yesihloko kwiithegi ze-anchor (amakhonkco).
Ngaphakathi kwesihloko okanye iithegi zenkcazo kwimifanekiso.
Nantsi ividiyo emfutshane Ungayiguqula njani iposti yakho slug kwiWordPress. SUKWENZE oku emva kokupapasha iposti yebhlog, nangona! Ngelixa ubhala iposti yakho yebhlog, ungayihlaziya iposi slug ngokulula:
tags: nokwandisaPermalinkiposi slugadiWordPressIgama elithi permalink
Sep 2, 2009 kwi-4: 26 AM
Kubonakala ngathi iCamtasia inezinto ezininzi ezinokubakho. Ngaba uyithengile isoftware, okanye ngaba uqhuba nje uvavanyo?
Into enomdla kukuba ayibonakali yomelele njengenguqulo 'ye studio' yeWindows. Kodwa kulula kakhulu ukuyisebenzisa! Ikhonkco ilinganisa iMovie kakhulu. Ndiyithengile mzuzu ukuphuma kwayo. Ndisebenzisa i-Snap X Pro kodwa yathi ukubhaliselwa kwam kuphelile… andikuqondanga bekunjalo umrhumo! Oku kuhle kakhulu.